ဘဝလေး အသစ်ပြန်ဖြစ်လာမှ မနာလိုမှုတွေနဲ့ ထိုးနှက်လာတဲ့ လူတွေအကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ ချမ်းချမ်း - Focus Myanmar
August 22, 2019 By Myanamr Plus in အနုပညာ Tags: ချမ်းချမ်း
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုတတ်တဲ့ အဆိုတော်မလေး ချမ်းချမ်းကတော့ သူမရဲ့အနုပညာကြောင့်ရော သူမရဲ့ပြတ်သားတဲ့ စိတ်ထားလေးကြောင့်ပါ ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးခြင်းကို အပြည့်အဝရရှိထားသူတစ်ဦးပါ။ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကံမကောင်းတဲ့ ချမ်းချမ်းကတော့ လက်ရှိမှာ သူမရဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့ သမီးလေးရယ်၊ သူမကို တကယ်ချစ်တဲ့သူရယ်နဲ့အတူ ဘဝအသစ်လေးကို ပြန်လည်စတင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာတော့ ချမ်းချမ်းက သူမဘဝအသစ်လေး ပြန်ဖြစ်လာမှ မနာလိုမှုတွေနဲ့ ထိုးနှက်လာတဲ့သူတစ်ချို့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူမနာကျင်ခံစားရတဲ့ အချိန်တုန်းက စိတ်မကောင်းသလို ရှိနေခဲ့ပြီး၊ အခု သူမဘဝအသစ်ပြန်စတော့မှ မနာလိုမှုတွေနဲ့ အတင်းပြောကြတဲ့ သူတွေအကြောင်း ပြောလာတဲ့ ချမ်းချမ်းရဲ့ရင်ဖွင့်စကားသံတွေကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ချမ်းချမ်းကတော့ “လူတိုင်းအလှဆုးံလူဖြစ်​ချင်​တယ်​..အိမ်​​ထောင်​မကျခင်​​ရော..ကျပီးချိန်​​ရော..ဒါ​ပေမဲ့ ဘဝကိုရုန်းကန်​ရတဲ့အ​မေနဲ့ သက်​​တောင့်​သက်​သာ​ယောကျားရှာစာကိုထိုင်​စားရတဲ့ အ​မေဆိုတာမတူပါဘူး..က​လေးအတွက်​ပင်​ပန်းတာခြင်းတူ​ပေမဲ့ ပိုက်​ဆံအတွက်​မပူရလို့ သူတို့မျက်​နှာ​ဘေး​တေက ကြည်​ရွှင်​​နေတယ်​…ကိုယ်​​တွေ​တော့ပိုက်​ဆံထွက်​ရှာပြီးမိသားစုကိုအချိန်​ပြည့်​မ​စောင့်​​ရှောက်​နိုင်​ခဲ့လို့..မိန်းမမြတ်​မဖြစ်​ခဲ့ဘူး မိန်​မတိုင်းကိုယ့်​မိသားစုကိုချစ်​ကြတယ်​..ကိုယ်​မရှိရင်​​တောင်​လင်​နဲ့သားသမီး​တေအတွက်​ အတတ်​နိုင်​ဆုံးဖြည့်​ဆည်း​ပေးတတ်​ကြတယ်​…တ​ယောက်​နဲ့တ​ယောက်​ချစ်​တတ်​ပုံချင်း..ဂရုစိုက်​ပုံခြင်းမတူကြဘူး…ဘယ်​လိုပဲဖစ်​ဖြစ်​မိန်းမဆိုတာမိသားစုကလွဲရင်​ကျန်​တာစိတ်​မဝင်​စားတတ်​ကြပါဘူး….
သူများမိသားစု​တွေလို​ပျော်​ရွှင်​စရာ​တွေရှိရင်​မျှ​ဝေ ကြ..စိတိညစ်​စရာဆိုလဲ​ဖေးမကြနဲ့ ..ကိုယ်​လဲတဘဝလုးံစာရည်​ရွယ်​ခဲ့ပါတယိ…ကိုယ့်​အလှည့်​ကျဖြစ်​မလာခဲ့ဘူး ဘယ်​သူ့ကိုမှလဲအပြစ်​မတင်​​တော့ပါဘူး…သမီးအတွက်​..အ​ကောင်းဆုးံကြိုးစားခဲ့​ပေမဲ့..ရလဒ်​မ​ကောင်းခဲ့ဘူး ကိ်ုယ့်​ကို တိုက်​ခိုက်​​ပြောဆို​နေတဲ့သူ​တွေကိုကြည့်​လိုက်​​တော့ ကိုယ်​နဲ့သိခဲ့တဲ့သူ​တွေ..ကိုယ်​နာကျင်​ခံစားရပြီးတ​ယောက်​ထဲ က​လေးတဖက်​နဲ့ လမ်း​ပျောက်​​နေတုန်းက..​ပျော်​ရွှင်​​ဖေးမမှု​တေနဲ့ အ​ဝေးဆုးံမှာရှိ​နေခဲ့တုန်းက စိတ်​မ​ကောင်းသလိုရှိ​ပေးခဲ့ကြတယ်​..ကိုယ့်​ဘဝ​လေးအသစ်​ပြန်​ဖြစ်​လာပြီး..ကိုယ့်​ကိုချစ်​တဲ့သူ​တေန​ဘေးမှာရှိလာ​တော့…မနာလိုမှု​တေနဲ့ကိုယ့်​ကိုအတင်း​တွေ​ပြောလာတယ်​…ထိုးနက်​လာကြတယ်​..​အော်​..လူ​တွေ လူ​တွေ…လိုက်​ဂရုစိုက်​​နေလို့က​တော့ ကိုယ်​​ရေပဲ​သောက်​​သောက်​ ထမင်းပဲစားစား အပြစ်​​ပြောလို့ပြီးမှာမဟုတ်​ဘူး..
အခုချိန်​ကစလို့ ကိုယ်​​ပျော်​ဖို့နဲ့စိတ်​ချမ်းသာဖို့ပဲ​တွေး​တော့မယ်​..သူတပါးကိုမထိခိုက်​သ​ရွေ့ ကိုယ့်​ဖာသာကိ်ုယ်​ချစ်​ရမယ်​..စိတ်​ချမ်းသာ​အောင်​​နေရမယ်​ဆိုတာ..သိလာတယ်​..ဘာရယ်​မဟုတ်​ပါဘူး…ပြုံးမိတယ်​ ကိုယိ့ကိုတိုက်​ခိုက်​ဖို့ ..အတင်း​ပြောဖို့သူတို့လုပ်​​နေ..​ရေး​နေကြပီဆိုကတည်းက..ကိုယ်​ကသူတို့ထက်​သာ​နေပြီ​လေ..ကိုယ့်​ကိုသူတို့​ခေါင်းထဲကထုတ်​မရလို့ပဲဆိုတာသိ​တော့..​မေတ္တာပို့​ပေးလိုက်​တယ်​…အကုသိုလ်​​တွေကင်းကြပါ​စေ..ကိုယ့်​ကိုယ်​ကို ပြန်​မြင်​နိုင်​ကြပါ​စေ​ပေါ့..” ဆိုပြီး သူမခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပြောပြထားတာပါ။
ချမ်းချမ်းကတော့ လတ်တလောမှာ သီချင်းအသစ်တွေလုပ်ရင်း၊ ခရီးတွေထွက်ပြီး ရှိုးတွေ ဆိုဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သမီးလေးကိုလည်း အရမ်းချစ်တဲ့ ချမ်းချမ်းကတော့ သူမသွားလေရာခေါ်သွားပြီး ဂရုစိုက်တတ်သူတစ်ဦးပါ။ စိတ်ထားကောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ချမ်းချမ်းကတော့ မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ဒေသတွေအတွက်လည်း ကူညီမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေလည်း ဘဝအသစ်စတင်ပြီး ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ချမ်းချမ်းကို အားပေးစကားလေးတွေ ပြောသွားခဲ့ကြပါဦးနော်။
အသံပါဝါကောငျးကောငျးနဲ့ သီခငျြးတှကေို ခံစားခကျြအပွညျ့နဲ့ သီဆိုတတျတဲ့ အဆိုတျောမလေး ခမျြးခမျြးကတော့ သူမရဲ့အနုပညာကွောငျ့ရော သူမရဲ့ပွတျသားတဲ့ စိတျထားလေးကွောငျ့ပါ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးခွငျးကို အပွညျ့အဝရရှိထားသူတဈဦးပါ။ အိမျထောငျရေးနဲ့ပတျသတျပွီး ကံမကောငျးတဲ့ ခမျြးခမျြးကတော့ လကျရှိမှာ သူမရဲ့ဘဝဖွဈတဲ့ သမီးလေးရယျ၊ သူမကို တကယျခဈြတဲ့သူရယျနဲ့အတူ ဘဝအသဈလေးကို ပွနျလညျစတငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလောမှာတော့ ခမျြးခမျြးက သူမဘဝအသဈလေး ပွနျဖွဈလာမှ မနာလိုမှုတှနေဲ့ ထိုးနှကျလာတဲ့သူတဈခြို့အကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတာ တှရေ့ပါတယျ။
ခဈြပရိသတျတှအေတှကျ သူမနာကငျြခံစားရတဲ့ အခြိနျတုနျးက စိတျမကောငျးသလို ရှိနခေဲ့ပွီး၊ အခု သူမဘဝအသဈပွနျစတော့မှ မနာလိုမှုတှနေဲ့ အတငျးပွောကွတဲ့ သူတှအေကွောငျး ပွောလာတဲ့ ခမျြးခမျြးရဲ့ရငျဖှငျ့စကားသံတှကေို ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျနျော။
ခမျြးခမျြးကတော့ “လူတိုငျးအလှဆုးံလူဖွဈခငျြတယျ..အိမျထောငျမကခြငျရော..ကပြီးခြိနျရော..ဒါပမေဲ့ ဘဝကိုရုနျးကနျရတဲ့အမနေဲ့ သကျတောငျ့သကျသာယောကြားရှာစာကိုထိုငျစားရတဲ့ အမဆေိုတာမတူပါဘူး..ကလေးအတှကျပငျပနျးတာခွငျးတူပမေဲ့ ပိုကျဆံအတှကျမပူရလို့ သူတို့မကျြနှာဘေးတကေ ကွညျရှငျနတေယျ…ကိုယျတှတေော့ပိုကျဆံထှကျရှာပွီးမိသားစုကိုအခြိနျပွညျ့မစောငျ့ရှောကျနိုငျခဲ့လို့..မိနျးမမွတျမဖွဈခဲ့ဘူး မိနျမတိုငျးကိုယျ့မိသားစုကိုခဈြကွတယျ..ကိုယျမရှိရငျတောငျလငျနဲ့သားသမီးတအေတှကျ အတတျနိုငျဆုံးဖွညျ့ဆညျးပေးတတျကွတယျ…တယောကျနဲ့တယောကျခဈြတတျပုံခငျြး..ဂရုစိုကျပုံခွငျးမတူကွဘူး…ဘယျလိုပဲဖဈဖွဈမိနျးမဆိုတာမိသားစုကလှဲရငျကနျြတာစိတျမဝငျစားတတျကွပါဘူး….
သူမြားမိသားစုတှလေိုပြျောရှငျစရာတှရှေိရငျမြှဝေ ကွ..စိတိညဈစရာဆိုလဲဖေးမကွနဲ့ ..ကိုယျလဲတဘဝလုးံစာရညျရှယျခဲ့ပါတယိ…ကိုယျ့အလှညျ့ကဖြွဈမလာခဲ့ဘူး ဘယျသူ့ကိုမှလဲအပွဈမတငျတော့ပါဘူး…သမီးအတှကျ..အကောငျးဆုးံကွိုးစားခဲ့ပမေဲ့..ရလဒျမကောငျးခဲ့ဘူး ကိုယျ့ကို တိုကျခိုကျပွောဆိုနတေဲ့သူတှကေိုကွညျ့လိုကျတော့ ကိုယျနဲ့သိခဲ့တဲ့သူတှေ..ကိုယျနာကငျြခံစားရပွီးတယောကျထဲ ကလေးတဖကျနဲ့ လမျးပြောကျနတေုနျးက..ပြျောရှငျဖေးမမှုတနေဲ့ အဝေးဆုးံမှာရှိနခေဲ့တုနျးက စိတျမကောငျးသလိုရှိပေးခဲ့ကွတယျ..ကိုယျ့ဘဝလေးအသဈပွနျဖွဈလာပွီး..ကိုယျ့ကိုခဈြတဲ့သူတနေဘေးမှာရှိလာတော့…မနာလိုမှုတနေဲ့ကိုယျ့ကိုအတငျးတှပွေောလာတယျ…ထိုးနကျလာကွတယျ..အျော..လူတှေ လူတှေ…လိုကျဂရုစိုကျနလေို့ကတော့ ကိုယျရပေဲသောကျသောကျ ထမငျးပဲစားစား အပွဈပွောလို့ပွီးမှာမဟုတျဘူး..
အခုခြိနျကစလို့ ကိုယျပြျောဖို့နဲ့စိတျခမျြးသာဖို့ပဲတှေးတော့မယျ..သူတပါးကိုမထိခိုကျသရှေ့ ကိုယျ့ဖာသာကိုယျခဈြရမယျ..စိတျခမျြးသာအောငျနရေမယျဆိုတာ..သိလာတယျ..ဘာရယျမဟုတျပါဘူး…ပွုံးမိတယျ ကိုယိ့ကိုတိုကျခိုကျဖို့ ..အတငျးပွောဖို့သူတို့လုပျနေ..ရေးနကွေပီဆိုကတညျးက..ကိုယျကသူတို့ထကျသာနပွေီလေ..ကိုယျ့ကိုသူတို့ခေါငျးထဲကထုတျမရလို့ပဲဆိုတာသိတော့..မတ်ေတာပို့ပေးလိုကျတယျ…အကုသိုလျတှကေငျးကွပါစေ..ကိုယျ့ကိုယျကို ပွနျမွငျနိုငျကွပါစပေေါ့..” ဆိုပွီး သူမခံစားရတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ပွောပွထားတာပါ။
ခမျြးခမျြးကတော့ လတျတလောမှာ သီခငျြးအသဈတှလေုပျရငျး၊ ခရီးတှထှေကျပွီး ရှိုးတှေ ဆိုဖွဈနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ သမီးလေးကိုလညျး အရမျးခဈြတဲ့ ခမျြးခမျြးကတော့ သူမသှားလရောချေါသှားပွီး ဂရုစိုကျတတျသူတဈဦးပါ။ စိတျထားကောငျးသူတဈဦးဖွဈတဲ့ ခမျြးခမျြးကတော့ မှနျပွညျနယျ ရဘေေးသငျ့ဒသေတှအေတှကျလညျး ကူညီမှုတှေ ပွုလုပျပေးနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခဈြပရိသတျတှလေညျး ဘဝအသဈစတငျပွီး ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနတေဲ့ ခမျြးခမျြးကို အားပေးစကားလေးတှေ ပွောသှားခဲ့ကွပါဦးနျော။